I-Apple Music sele inemo emnyama kunye nenkxaso yeChromecast | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukungabinayo imo emnyama kwinkqubo yakho entsha kraca lulwaphulo-mthetho. Kungenxa yoko le nto I-Apple Music ibeke iibhetri kwi-Android ukusizisela iNdlela eMnyama kunye nokusasaza kwiChromecast. Iindaba ezimbini ezibaluleke ngakumbi kusetyenziso lweApple ongafuni ukuba abo bashiye i-iPhone yabo bayishiye inkonzo yabo yomculo.
El Inkxaso yeChromecast ikhona Kwinguqulo ye-beta kwaye yakhutshwa ekupheleni kuka-Agasti. Kodwa ngoku sele ifumaneka kuguqulelo oluzinzileyo lomntu wonke. Ke ungasebenzisa ilayibrari yomculo onayo kwi-app ukuyivula nge-dongle enkulu enjengeChromecast.
Ngokubhekisele kwiNdlela emnyama, iApple Music iyifaka ukuxhasa i-Android 10 kwaye ke inokongezwa kuluhlu lweapps ezivumela ukutshintsha kumxholo omnyama xa usenziwa kwinkqubo. Ukufikelela kwizikhululo zikanomathotholo nako kufakiwe ngeTuneIn, iRadio.com kunye neHeartRadio.
Ke ngoku inkonzo inayo izikhululo zikanomathotholo ezingaphezu kwama-100.000 XNUMX ngezo nkonzo zintsha nezibandakanyiweyo. Ke sinayo iApple ekuyekeni ekunikezeleni ngeenkonzo ezingcono kubasebenzisi beqonga lokusasaza umculo kunye neapps ephucula kakhulu amava; khumbula oko kuqaliswa kokuqala ulwamkelo olungaphezulu koku "mnandi" luluntu lomsebenzisi lwe-Android.
Kucace gca ukuba I-Apple ifuna ukubambelela kwiinkonzo zayo, kuba banokuba ngumthombo obalulekileyo wenzuzo ngelixa izixhobo zabo, ubuncinci iifowuni zabo, iseyiminyaka ngasemva kobuchwephesha obutsha obufakwa yiSamsung, iXiaomi, iHuawei nezinye. Ukuba awukamniki iApple Music ithuba kwiselfowuni yakho ye-Android, mhlawumbi lixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Apple Music ibandakanya indlela emnyama kunye nokusasaza kweChromecast kwi-Android
Imidlalo ye-Android enoburharha eyakhululwa kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo